Dagaal toos ah ma dhexmari karaa Sacuudiga iyo Iiraan? | Gabiley News Online
Dagaal toos ah ma dhexmari karaa Sacuudiga iyo Iiraan?
Sacuudiga iyo Iiraan waa cadowga isugu xun. Muddo dheer ayuu khilaaf ka dhexeeyay, balse dhowaanahan xaaladdu way sii xumaaneysaa. Hoos ka akhriso sababaha.
Maxaysan saaxiibbo u ahayn Sacuudi Carabiya iyo Iiraan?
Sacuudiga iyo IIraan – laba dal oo awood leh – waxay si weyn ugu loollamayaan galaangalka gobolka Bariga Dhexe.
Khilaafkooda u dhexeeyay in muddo ah waxaa sii xumeeyay kala duwanaanshaha madaahibta diinta. Waxay kala raacsan yihiin labada qeyb ee Islaamka. Iran waxaa u badan Shiico halka Sacuudiga uu isu arko dalka ugu awoodda badan Muslimiinta sunniga ah.
Kala qeybsanaanta diinta waxay si weyn uga muuqataa qariidadda bariga dhexe, halkaas oo dalalka Shiicada iyo kuwa Sunni ay kala eegtaan Sacuudiga iyo Iiraan si ay taageero iyo hoggaamin uga kala helaan.
Taariikh ahaan, Sacuudiga oo ah boqortooyo iyo meesha uu Islaamka ka bilowday, waxay isu arkaan in dunida Muslimiinta ay hoggaan u yihiin.
Si kastaba, awoodda Sacuudiga wuxuu loollan ku bilowday sannadkii 1979-kii oo Iiraan uu ka bilowday kacaan islaami ah, oo go’aankiisu ahaa in afkaartooda ay ka gudbiya xuduudaha Iiraan.
Gaar ahaan, 15-kii sano ee la soo dhaafay, farqiga u dhexeeya Iiraan iyo Sacuudiga waxaa sii xumeeyay dhacdooyiin is xigxigay.
Sannadkii 2003, duullaankii uu Mareykanka hoggaaminayay ee lagu qaaday Ciraaq waxaa xilka looga tuuray Sadaam Xuseen, oo ahaa Carab Sunni ah, kaas oo cadow ay isku ahaayeen Iiraan. Taas waxay meesha ka saartay awood militari oo Iiraan ay wajeheyso, culeys weynna ku ahaa.
Tallaabadaas waxay albaabada u furta dowlad Shiico u badan in Ciraaq ay hoggaamiso, gacanta Iiraan-na ee dalkaas ay kula jirto ayaana sii dheeraatay wixii ka dambeeyay burburkii xukuumaddii Sadaam.
Ka dib kacdoonkii dalalka Carabta ee 2011, wuxuu sababay xasillooni la’aan siyaasadeed oo gobolka oo dhan soo wajahday. Iiraan iyo Sacuudiga waxay taasi u adeegsadeen sii ballaarinta galaangalkooda. Dalalka la xusikaro waxaa ka mid ah Suuriya, Baxrayn iyo Yaman. Ka dibna waxaa sii xoogeystay shakiga lakala qabo.
Dalalka dhalleeceeya Iiraan waxay sheegayaan in ujeedadeedu tahay is muujin ama sii ballaarinta dadka ku matala gobolka iyo iskudeyga qabsashada maamulka Iiraan ee illaa badda Mediterranean.
Maxaa xaaladda sii xumeeyay?
Khilaafka istiraatiijiyadeed wuu sii kululaaday, sababtoo ah marka dhinacyo badan laga eego, Iiraan ayaa ku guuleysaneysa hardanka gobolka.
Dalka Suuriya marka la eego, Iiraan (iyo Ruushka) waxay taageeraan madaxweyne Bashar Al-Asad taas oo ciidammadiisa u fududeysay in ay xididdada u siibaan mucaaradkii uu Sacuudiga taageerayay.
Sacuudi Carabiya waxay si ba’an ugu dadaaleysaa xakameynta galaangalka Iiraan ee sii kobcaya, halka kacaanka iyo dhiiranaanta dhaxal-sugaha da’da yar ee Sacuudiga, Maxamed Bin Salmaan, la dareemayo in xaaladda gobolka uu uga sii darayo.
Wuxuu horboodayaa dagaal ka dhan ah Xuutiyiinta dalka Yaman, qeyb ka mid ah xididada Iiraan ee dalkaas, balse afar sano ka dib, dagaalkaas wuxuu u muuqdaa mid khamaar ah oo aan lagu guuleysan karin.
Iiraan waxay beenisay in hub ay siiso Xuutiyiinta. Balse warbixinno y soo saareen khubarada Qaramada Midoobey waxay muujinayaan taageerada awoodda leh ee Xuutiyiinta ay ka helayaan maamulka Tehraan ee isugu jira teknolojiyad iyo hub casri ah.
Sidoo kale dhanka Lubnaan, xulafada Iiraan, kooxda Xisbullah oo ah Shiico, waxay hoggaamineysaa qeyb awood siyaasadeed oo weyn leh. Waxay sidoo kale leedahay garab si weyn u hubeysan.
Dad badan waxay aaminsan yihiin in ra’iisul Wasaaraha Lubnaan Sacad Xariiri oo Sacuudiga taageero ka helayay ay boqortooyada ku qasabtay inuu iscasilo, sannadkii 2017-kii, taas oo loo sababeynayay galaangalka Xisbullah ee gobolka. Ka dib markii uu ku noqday Lubnaan ayuu ka laabtay iscasilaaddiisa.
Waxaa sidoo kale jira, awoodo kale oo kaalin ku leh arrinta. Sacuudiga waxaa sii dhiirageliyay taageerada maamulka Donald Trump, halka Iraa’iil oo halis u aragta Iiraan ay “taageereyso” dadaalka Sacuudiga ee xakameynta awoodda Iiraan.
Dalka Yahuudda wuxuu cabsi ka qabaa sida dagaallamayaasha Iiraan ay taageereyso ee Suuriya ay ugu dhowaaday xuduuddeeda, taas oo ah wax aan horey loo arag.
Dalalka labada dhinac kala taageersan ee Gobolka
Marka si guud looga hadlo Bariga Dhexe waxaa si weyn uga muuqda khilaafka Sunniyiinta iyo Shiicada.
Kuwa Sacuudiga taageersan waa dalalka ay Sunniyiinta hoggaaminayaa ee Gacanka – Imaaraatka Carabta iyo Baxrayn – Sidoo kale Masar iyo Urdun.
Dhanka dalalka taageeraya Iiraan waxaa ugu weyn madaxweyne Bashar Al-Asad, xubin ka tirsan Shiicada mayilka adag, kaas oo ku tiirsan maleeshiyaadka Shiicada ee taageerada ka hela Iiraan, sida Xisbullah, si uu uga guuleysto kooxaha mucaaradka ee Sunniyiinta u badan.
Sidoo kale dowladda Ciraaq ee hoggaankeedu Shiicada u badan yihiin waa saaxiibka dhow ee Iiraan, inkastoo xiriir ay la leedahay Mareykanka oo ka caawiyay dagaalka ka dhanka ah ururka la baxay Khilaafada Islaamka.
Ma waxaan ku wajahannahay dagaal toos ah oo dhexmara Sacuudiga iyo Iiraan?
Illaa iyo hadda, Tehraan iyo Riyaadh waxaa dhexmaray dagaallo dadban. Midkoodana ma muujin dagaal toos ah in uu doonayo, laakiin, weerarrada xuutiyiinta ee lagu qaado caasimadda Sacuudiga ama sida midkii ugu dambeeyay in lala eegtay xuddunta dhaqaalaha, wuxuu uga sii dari karaa xaaladda.
Weerarrada Xuutiyiinta ee Sacuudiga wuxuu, si lama huraan ah, u furay dhan kale oo ay ku dagaallamaan Riyadh iyo Tehraan. Dhanka badda Gacanka Carabta, Iiraan iyo Sacuudiga ayaa isku wajahayaan xuduudda badda, haddana xiisadahan sii koraya waxay sababi karaan dagaal guud oo baahsan.
In ay si xor ah ku maraan Gacanka waa u muhiim Mareykanka iyo dalalka kale ee Reer Galbeedka, dagaal kastana waxaa loo arkayaa inuu caqabad ku noqon karo isu socodka – muhiimka u ah maraakiibta caalamiga ah iyo Shidaalka – taas oo si fudud ku soo jiidan karta ciidamada cirka iyo Badda ee Mareykanka.
Muddo dheer, Mareykanka iyo xulafadiisa waxay Iiraan u arkayeen dal caqabad ku ah xasilloonida Bariga Dhexe. Hoggaanka Sacuudiga wuxuu si joogto ah Iiraan ugu arkayaaa halis taagan. Dhaxal-sugaha wuxuu u muuqdaa mid doonaya ficilkaste ee uu noqdo in la qaado si uu uga hortago awoodda Iiraan ee sii baaheysa.
Halka uu Sacuudiga ka nugulyahay waxaa lagu muujiyay weerarradii ugu dambeeyay ee lala eegtay xarumeheeda Shidaalka. Haddii dagaal uu bilowdo, wuxuu noqon doonaa mid si lama filaan ah u dhacay, balse ma noqon doono mid ay labada dhinacba ka fakareen oo la isu diyaariyay.
Balse ololaha Sacuudiga wuxuu qeyb ahaan dhiiragelinayaa shakiga aan xoogga badneyn iyadoo ay jirto ujeedooyiinka maamulka Donald Trump ee gobolka, haddana waxay arrimahaas si aan loo baahneyn usii hurinayaan xiisadda.